भिन्डि खानुको यति धेरै अचम्मैको फाइदाहरु । – Yuwa Aawaj
बैसाख २८, २०७८ मंगलबार 491
स्वास्थ्य : भिन्डीलाई हामी सामान्यतया एउटा तरकारीको रुपमा सेवन गर्छौ तर हामीबाट कति जनालाई थाहा छैन होला कि भिन्डीको सेवनले हाम्रो स्वाथ्यमा यति फाइदा गर्छ जुन आज तपाइले थाहा पाएर पर्नुहुनेछ चकित ।
गर्भवती महिलाले भिन्डी खानाले भ्रू’णको दिमागको विकास राम्रो हुन्छ । साथै, भिन्डी खाँदा गर्भ तुहिने जोबखिम पनि घट्छ । भिन्डीमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । यो राम्रोसँग पच्छ र यसले पाचन प्रक्रियालाई पनि बलियो बनाउँछ ।
भिन्डी खानाले शरीरमा सुगरको मात्रा निय’न्त्रित अवस्थामा रहन्छ । म’धुमेहका रोगीलाई यो ला’भदायक हुन्छ । भिटामिन–के र फो’लेट्स पाइन्छन्, जसले रगत जम्नबाट रोक्छन् र हड्डी बलियो बनाउने गर्छन् । भिन्डीमा पाइने भिटामिन–सीलगायत तत्वले दमको असर कम गर्छ ।
आयुर्वेदका अनुसार भिन्डीको फूल र पातलाई श्वा’सप्रश्वाससम्बन्धी रोग निको पार्न प्रयोग गरिन्छ । वैद्यको पराम’र्शमा भिन्डीको फूल र पातलाई ब्रो’ङ्काइटिस र निमोनियाको उपचार गर्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भिन्डीमा पाइने फाइबरले क’ब्जियतको समस्या कम गर्छ । खानाले क्या’न्सरको जो’खिम घट्छ । भिन्डी खाइरहने गर्दा आन्द्रा, कोलोन–रेक्टल क्या’न्सर लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । भिन्डीमा क्या’लोरी कम पाइन्छ, जसले गर्दा यो मोटाउने समस्या भएकाहरूका लागि लाभदायक हुन्छ । सोल्युबल फा’इबर पे’क्टिन पाइन्छ, जसले शरीरमा ख’राब खालका कोलेस्टे’रोलको मात्रालाई कम गरिदिन्छ ।
भिन्डीमा पाइने भिटामिन–सीलगायत तत्वले छालामा जम्मा भएका विकारलााई पखाली छालालाई स्वस्थ राख्छ । भिन्डीमा अक्सि’डेन्ट्स, भिटामिन–सी, म्याग्ने’सियम, क्या’ल्सियम, आइरनजस्ता तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले शरीरको रोगप्रति’रोधी क्षमता बढाउँछन् । आँखा धमिलो देख्नेका लागि पनि भिन्डीको तरकारी खानु लाभदायक हुन्छ ।
भिन्डीमा पाइने आइरन, भिटामिन–के आदिले रक्तअल्पता हुन दिँदैन । रगतमा हेमो’ग्लोबिनको मात्रा कम छ र रेड ब्लड सेल आवश्यक मात्रामा छैन भने भिन्डी खाइरहने गर्नुपर्छ । भिन्डीमा क्षार तत्व पाइन्छ, जसले अल्सरको असरलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउछ ।
यो समाचार पनि पढ्नुहोस,बागलुङ, ११ साउन । बागलुङ नगरपालिका–१ निरयघाट नजिक खसेको पहिरोले स्काभेटर, टिपर र ट्रया’क्टर पुरेको छ ।गए राति साढे आठ बजे खसेको पहिरोमा परी टिपर चालक निर्मल पुन र ट्याक्टर चालक रोशन नेपाली बे पत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दीपक रिजालले जानकारी दिए ।
पहिरो गएको केहीबेरमै उ द्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली परिचालित भएको थियो । निरन्तर पहिरो खसिरहेको र जो खिम’युक्त भूगोल भएकाले मध्यरातसम्म उ द्धारको प्रयास गरिए पनि सम्भव हुन सकेको थिएन । सुरक्षाकर्मीले जेनेरेटरबाट बत्ती बालेर रातभर उ द्धारको प्रयास गरेका थिए ।
अहिले बिहानैदेखि उ द्धारकार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घ टना भएको लामो समय बितिसक्दा समेत बे पत्ता चालक सम्पर्कमा नआएकाले पहिरोमै पुरिएको आ शङ्का गरिएको वडा सदस्य सूर्य लामिछानेले जानकारी दिए । पुरिएको स्काभेटर निर्माण व्यवसायी विमलेस आचार्य र टिपर पर्वतका हरि घिमिरेको भएको बताइएको छ । -क्रेजी नेपाल
Posted in स्वास्थ्य / खानपिन
Prevलौका खानुको ७ फाइदाहरु जान्नुहोस ।
Nextकिस्ता किस्ता गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक महिना निषेधाज्ञाको तयारी ।
किसमिसले पूरा गर्छ शरीरमा रगतको कमी, यस्ता छन् यसको अचम्मैको फाइदाहरु !
जसपा नेता श्रेष्ठ : ओलीले दिएको आश्वासन टाट पल्टेको व्यापारीले दिएको बाउन्स चेक जस्तै हो ।
डा. दिक्षितभन्नुहुन्छ : महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ ।
मेलम्ची बाढी पी’डितका लागि खटेका थिए धर्म, ११ हजार भोल्टको करेन्ट लागेर गु’माए ज्यान ।